‘विप्लव’ को डिमाण्ड : वार्ता ओलीसँगमात्रै गर्छु ! | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ बैशाख २२ गते प्रकाशित, l १४:४१
काठमाडौं, २२ बैशाख । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगबाहेक अरुसँग वार्ता नगर्ने भएका छन् । स्रोतकाअनुसार सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिसँग वार्ता नगर्ने विप्लवको घोषणा छ ।
सरकारले समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेलाई विप्लवसँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएअनुसार पाण्डेले पनि विप्लवसँग वार्ताको लागि धेरै पटक प्रयास गरे । तर, उनले विप्लव समूहका शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता गर्न सकेनन् । यो बीचमा विप्लवले अब वार्ता नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरुसँग वार्ता नगर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
‘विप्लव’ समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो । अहिलेसम्मपनि सरकारको उक्त कदमको विरोध भैरहेको छ । तर, विप्लव समूहका केही प्रभावशाली नेताहरुले उत्तजेजक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न खोजिरहेका छन् । सोहीअनुरुप पाण्डेले पनि वार्ताको प्रयास गरे । तर, विप्वल समूहले पाण्डेसँग वार्ता गर्ने कुनै छनक नै देखाएको छैन् ।
विप्लवले चाहेजस्तो के अब प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुसँग आँफै वार्ता गर्न तयार होलान त ? पक्कैपनि ओली आँफैले प्रतिबन्ध लगाएको शक्तिसँग वार्ता गर्न यति सजिलै तयार होलान भन्न सकिने अवस्था छैन ।